Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Excellency Dr. Tony Tan Keng Yam, the Republic of Singapore – Ministry of Foreign Affairs
Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Excellency Dr. Tony Tan Keng Yam, the Republic of Singapore
U Htay Aung, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Singapore, presented his Credentials to His Excellency Dr. Tony Tan Keng Yam, the Republic of Singapore, on 27 February 2014, in Singapore.
Dated.5March 2014
စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးဌေးအောင်သည် ၎င်း၏ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူမြို့၌ စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ၊ သမ္မတ ဒေါက်တာ တိုနီတန် ကင်ယမ်းထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၅ ရက်